Misaotra ani Tsikisariaka. Tsy maintsy atambatra ny hery. Ny mitabe hono tsy lanin'ny mamba. Dia tsy ho lanin'ny mamba isika ary tsy hisy hanao ampihi-mamba intsony ny fandrosoana fa ho antsika rehetra.
Nampidirin'i DadaRabe 26 Feb 2008, 15:18
izay indrindra DdRb a !
Nampidirin'i tsikisariaka 03 Mar 2008, 14:13
Manao resaka retour aho fa izao vao nahita ity lahatsoratra ity.
Ny ahy ny tena tsy laitran'ny vavoniko dia ilay mamaky ny sujet-n'ny malagasy sasany ao @ forum moov.mg milaza hoe ny malagasy tsy mipetraka any Madagasikara dia tsy tia tanindrazana! Mba hafahafa mihitsy!
Nampidirin'i Lalasoa 19 Mar 2008, 20:18
Lalasoa> Ny fitiavana tanindrazana tsy miankina amin'ny toerana misy anao mihitsy. Samy manana ny lalan'ny fiainana arahiny. Indraindray aza afaka manasoa kokoa ianao aty lavitra noho ny eo akaiky.
Samy manana ny fiainany é
Nampidirin'i DadaRabe 19 Mar 2008, 20:46